बिदेशको पैसा, स्वदेशमा लगानी – Rajmarg Online
बिदेशको पैसा, स्वदेशमा लगानी
शुक्रबार, जेठ ०३, २०७६
टेक बहादुर पुन,
लमही, जेठ । धेरै कमाउने र धनी बन्ने सपना बोकेर दाङको लमही नगरपालिका ६ निवासी ३३ बर्षिय दिनेश आचार्य युएई पुगे । त्यहाँ ६ वर्ष बिताए । दैनिक १४÷१५ घण्टा काममा घोटिनु पर्दथ्यो । भने जस्तो कमाइ भएन । मिहिनेत त गर्नै पथ्र्यो तर, तलब र काम राम्रै थियो । उनी खुसी नै थिए ।
खाडीको चर्को घाम, कहिले भोकै प्यासै, कहिले अनिदै काम गर्नुको सकस कम्ती थिएन आचार्यलाई ।’ लामो डिउटीले गर्दा खानाको टुङ्गो हुन्थेन’ उनले दुखेसो पोख्दै भने ‘भोकै प्यासै काम गर्नु पथ्र्यो, बाबु आमालाई जति सन्तानको पिर कसलाई लागोस र ? आचार्यका साना नानिबाबु, ताते ताते खेलाउने ईच्छा कसको बाबालाई नहुँदो होर ? परिवारबाट टाढा बस्नुपर्दाको पीडा पनि भोगे उनले ।
‘छोराछोरीको याद आउथ्यो घर संझन्थे र रुन्थे’ आचार्यले भने । उनमा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलायो र घर फर्कने निधो गरे । तर घर फर्केर के गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए । जेनतेन दुख गरेर नेपालमा व्यापार तिर लगानी गर्ने सोच बनाए ।
उनको सपना आज पूरा भएको छ । लमही बजारमा ४० लाख रूपैयाको एकल लगानीमा उनले ‘हाम्रो राम्रो डेकोरेशन एण्ड सप्लायर्स’ सँचालन गरेका छन । प्रयाप्त सेवा सुबिधा सहित घर सजावटका सामाग्री रहने गरी व्यावसाय संचालन गरेका हुन । लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुल बहादुर केसीले बिधिवत रुपमा डेकोरेशनको उद्वघाटन गरेका हुन । ठूलो लगानीले देशलाई ठुलै फाईदा हुने प्रमुख केसीले बताए ।